Ungayisebenzisa Kanjani Isiteshi Sakho Sokuhumusha Okusetshenziswayo ukuze Uzuze kwi-Ecommerce Boom | Martech Zone
I-ecommerce ibilokhu iyindlela ekhulayo kule minyaka eyishumi edlule. Futhi ngobhadane, abantu abaningi bathenga ku-inthanethi kunanini ngaphambili. I-Ecommerce inikeza indlela ephelele yokufinyelela kubantu emhlabeni wonke kusuka ngemuva kwekhompyutha. Ngezansi, sizobheka ukubaluleka kwe- ukuhumusha kokumaketha services nokuthi ungazisebenzisa kanjani ukukhulisa ukuthengisa kwakho kwe-eCommerce.
Kungani Kubiza ukusebenzisa Ukuhumusha Okuchwepheshe Kwezobuchwepheshe Kwamasu Wakho Wokukhangisa Wamazwe Omhlaba
Sebenzisa insizakalo yokuhumusha ngobungcweti yomsebenzi wakho we-eCommerce kungathola imivuzo emikhulu. U-Ofer Tirosh, oyi-CEO yomhlinzeki wezinsizakalo zolimi uTomedes, unikeza iseluleko maqondana nokuthola inkampani efanelekile nokuyakhela i- isu lokukhangisa lamazwe omhlaba ukuze unwebe:
Uma ungakhulumi ulimi lwezwe okukhulunywa ngalo, thola i-ejensi ehloniphekile ozosebenza nayo - futhi yenze ngokushesha! Ukubandakanya i-ejensi ebhizinisini lakho lokumaketha emhlabeni wonke kusukela ekuqaleni kungenza umehluko omkhulu ethubeni lakho lokuphumelela. Noma ngabe ucwaninga ngamasiko endawo, ufuna imininingwane ngamasu wokumaketha owathandayo kumakethe yakho eqondiwe, noma wethula imininingwane ngomkhiqizo wakho, ukuba nothile osekhuluma kahle ulimi kubalulekile. Umhumushi omuhle okwazi ukuphatha yonke into kusuka kulwazi lokumaketha kuya kwizinsizakalo zokuhumusha iwebhusayithi ngokushesha angaba yingxenye ebalulekile yakho isu lokukhangisa lamazwe omhlaba.
U-Ofer Tirosh, isikhulu esiphezulu seTomedes
I-ecommerce ngokuqinisekile iyaqhuma kulo nyaka, lapho abantu baphoqeleka ukuthenga ku-inthanethi ngenkathi izitolo zivala noma ziphoqelela ukuqhela kwezenhlalo. Ku-Q2 2020, ukuthengiswa kwe-eCommerce e-US, ngokwesibonelo, iqhume kuya ku-16.1%, kusuka ku-11.8% ku-Q1.
Funda ukuze ufunde ukusebenzisa ukuhumusha kokumaketha ukusiza ukukhulisa ibhizinisi lakho le-eCommerce.
Ungayimaketha Kanjani Isiza Sakho Se-ecommerce Usebenzisa Ukuhumusha Kwezentengiso
Ukuhumusha kokumaketha ifaka izinhlobo eziningi zokumaketha kwedijithali ezingakusiza ukuthi udlulisele igama kubantu abakulungele ngewebhusayithi yakho ye-eCommerce. Ngokusebenzisa ukuhumusha kokumaketha, ungaqiniseka ukuthi le mizamo elandelayo yokukhangisa yedijithali ifaka abantu kusayithi lakho le-eCommerce. Yiziphi ezinye izibonelo zokuhumusha? Ikakhulukazi kusuka kumongo wedijithali, zifaka:
Okuthunyelwe kwabezindaba zomphakathi
Izikhangiso zedijithali, kufaka phakathi izikhangiso zokubonisa nezikhangiso zokuxhumana nabantu
Izikhala zokumaketha ezihambisanayo
Ukuhumusha kokumaketha futhi kungasiza ngokuhumusha izinto zokumaketha zokukhangisa kwendabuko uma leyo nto inkampani yakho ibona kufanelekile ukuthi utshale imali kuyo njengawe gxila Isu lokumaketha imizamo. Ukuhumusha kokumaketha ingaphatha izikhangiso zomdabu zokuphrinta, izincwajana, izincwadi zokuthengisa, amaflaya, izinhlu, nokuningi.
Ukumaketha kokuqukethwe kungenye indlela yokuhambisa i- ukuhumusha kokumaketha chitha ku-eCommerce boom. Akukhuthazi ngqo umkhiqizo noma insizakalo ethile. Esikhundleni salokho ikhiqiza okuqukethwe okufundisayo noma okujabulisa abantu abafanele. Isibonelo, isitolo esiphakela i-eCommerce esitolo singaveza okuthunyelwe kwebhulogi mayelana nezindlela ezinhle zokuqeqesha umdlwane omusha.
Ukumaketha kokuqukethwe kwenza abantu babandakanyeke kulo mkhiqizo futhi kukhulume nabangahle babe ngamakhasimende ngendlela ewusizo kubo. Ukumaketha kwendabuko kudinga ukuthi abantu bathenge, okuvalwa ngabasebenzisi abaningi be-inthanethi banamuhla. Ukumaketha kokuqukethwe kungaba yingxenye eqinile yanoma yikuphi isu lokukhangisa lamazwe omhlaba.
Uma ukhetha ukuhamba nokumaketha kokuqukethwe, izinsizakalo zokuhumusha zingaqiniseka ukuthi okuqukethwe kwakho okuwusizo nokujabulisayo kugcina imilayezo yayo eyinhloko futhi kuhambisana kahle nolimi olusha namasiko.
Ukuhumusha Kwezokumaketha kanye Nesiza Sakho Se-Ecommerce
Ukuhumusha kokumaketha ingasiza futhi ngewebhusayithi yakho ye-eCommerce uqobo. Ukuqinisekisa ukuthi isayithi lakho lihunyushiwe futhiokwenziwe indawo ethile kuyingxenye ebalulekile ye- isu lebhizinisi lamazwe omhlaba. Kuyini ukuhumusha okujwayelekile? Ukuhumusha kuqinisekisa ukuthi umbhalo uqobo ufunda kahle ngolimi olusha. Kodwa-ke, ukwenziwa kwasendaweni nakho kubaluleke kakhulu ku- Isipiliyoni se-eCommerce. Ukwenza okwasendaweni kungakwazi:
Buyekeza zonke izimpawu nokufometha kuwebhusayithi, njengezimpawu zemali, amafomethi wekheli, nezinombolo zocingo
Qiniseka ukuthi ukwakheka kuyavumelana nokulindelwe ngabathengi basendaweni nangolimi olusha
Buyekeza ihluzo njengezithombe ukufanisa imihlangano yamasiko yasendaweni
Siza isiza se-eCommerce ukufanisa imithetho yendawo efana nemithetho yobumfihlo noma izaziso zekhukhi
Gcina okuqukethwe kuwebhusayithi uqobo kuyazwela ngokwesiko
Enhle ukuhumusha kokumaketha service ingaphatha ukuhumusha, ukwenza okwasendaweni, kanye nokudlula. Ingabonisa ukuloba nokuhumusha kwenziwe kwaba lula kokuqukethwe kwevidiyo futhi kungaqinisekisa ukuthi wonke amakhophi aqondaniswe nokulindelwe izethameli eziqondiwe.
Yonke le mininingwane ihlangana futhi yenze iwebhusayithi ebukeka ngobungcweti ye-eCommerce. Kuvamile ukuthola isiza se-eCommerce esingahumushiwe kahle noma esinezimpawu zemali ngendlela yakwamanye amazwe. Lezo zinto ezincane zenza iwebhusayithi kube nzima ukuyisebenzisa futhi zikwenze uzibuze ukuthi ngabe ukhubekile yini kusayithi lokukhwabanisa. Qiniseka ukuthi Isipiliyoni sekhasimende se-eCommerce kuyinto enhle kumakhasimende akho ngokwenza okwenziwe iwebhusayithi kube okwasendaweni. Ukwenza okwasendaweni kuyingxenye ebalulekile yokuhamba phambili amasu wokumaketha aphesheya.
Ungazithola Kanjani Izinsizakalo Zokuhumusha Ezingabizi
Qiniseka ukuthi uthenga phakathi kwama-ejensi ahlukile wokuhumusha. Ungabathola ngokubuza nxazonke zenethiwekhi yakho yobuchwepheshe noma useshe ku-inthanethi.
Ungathola izinsizakalo zasendaweni ngokusebenzisa amagama afana nezinsizakalo zokuhumusha eduze kwami, izinsizakalo zokuhumusha eziqeqeshiwe zase-UK noma i-ejensi yokuhumusha yaseLondon. Ungahle ubheke insiza ngolimi oludingayo, usebenzisa amagama afana nalawa ukuhumusha kokumaketha ngeSpanishi, ukuhumusha kokumaketha ngesiShayina, noma ukuhumusha kokumaketha ngesiFulentshi.
Qiniseka ukuthi ulungiselela uhlu lwemibuzo ngenkonzo ngayinye. Ukuthi oxhumana naye uyiphendula kanjani leyo mibuzo kuzokutshela ukuthi banolwazi kangakanani nokuthi bangabantu abaxhumana kanjani nabantu. Ungabuza ngamanani entengo, ukuthi ahlala kanjani ehlelekile ukuze ahlale kusikhathi esinqunyiwe, ukuthi yiziphi izimfanelo zabo zokuhumusha, nokuthi bathini isipiliyoni sabo ukuhumusha kokumaketha kuyinto.
Tags: ukuhumusha kwe-ecommerceezentengiselwano zomhlaba wonkeezomnotho zomhlaba wonkeamazwe omhlabaukuhumusha kokumakethaIzilimi eziningiutamatisiukuqoshwaukuhumusha okulotshiweukuhumushaizinsizakalo zokuhumusha